Google Play ga -agbanwe usoro ọkwa ngwa | Androidsis
Google Play ga-agbanwe usoro akara maka ngwa
Google Play na-eche ọnwa ole na ole jupụtara na mgbanwe. Androidlọ ahịa ngwa gam akporo na-aga ịgbanwe atụmatụ ya n'oge na-adịghị anya, ebe ọ na-anwale ugbu a na a imewe dabere na Ihe Omuma. N'ihi nke a, ndị agbanwe oyiyi n'ime ụlọ ahịa na eze, dị ka ekwenye na izu ole na ole gara aga. Ugbu a, a na-ekwuwapụta mgbanwe ọhụrụ, nke dị mkpa.
Ebe ọ bụ na usoro ọnụahịa ga-agbanwe. Iji kọwaa ya, ụzọ e si agbakọ ọkwa maka ngwa ahụ na Google Play ga-agbanwe. Ha na-achọ usoro nke na-eme ihe ziri ezi na ngwa ndị dị na ụlọ ahịa ahụ. Ha achọtala ya. Usoro ọhụrụ a ga-eji?
Ruo ugbu a, nyocha anyị hụrụ na ngwa dị n'ụlọ ahịa ahụ, bụ nkezi nke njirimara niile. Ọ bụ akara na ọtụtụ ndị ọrụ na-ele anya mgbe nbudata ngwa na ekwentị gam akporo ha. Ebe ọ bụ na ọnụọgụ dị elu, ọ na-enye mmetụta na ngwa dị mma. Ọ bụ ezie na a na-ewere onye dị ala dị ka nke ahụ kwuru na ngwa ahụ adịghị mma.
Ihe bụ nsogbu bụ usoro a egosighi n'ezie ngwa. Ebe ọ bụ na na mgbasa ozi a anyị na-ahụ na Google Play anyị na-ahụ ọkwa ndị dị nká. Ngwa ahụ enweela ike melite ọtụtụ oge, ma ọ bụ ka njọ. Mana akara ochie ndị ahụ dabere na ihe na-adịkwaghị adị ma ọ bụ enweghị ike itinye ya.
Maka nke a, bido na Ọgọstụ, Google Play ga-agbanwe nke a. Newzọ ọhụrụ a ga-esi edozi ngwa ga-aga nyekwuo ihe na nyocha ndị kachasị ọhụrụ nke kwuru na ngwa. Ọ bụ ezie na nyocha ndị emere na nsụgharị ochie nke ngwa ahụ ga-efunahụ mkpa. Nke a bụ ihe na-eche na mgbanwe dị mkpa, ka mma ịmetụta mgbanwe nke ngwa ahụ nwere. Ebe ọ bụ na ọ bụrụ na ngwa ahụ melite ọtụtụ na mmelite ya, nyocha ya dị mma, nke gosipụtara mgbanwe ndị a, kwesịrị igosi mgbe niile.
O doro anya na ọ bụ ezigbo nzọ na akụkụ nke Google Play. Ọ na-achọ ime ikpe ziri ezi na ngwa ndị a n'ụzọ dị otú a. Ọ bụrụ na ngwa dị njọ, mana ka ọ dịwanye mma karịa oge, ekwesịrị ịmara nke a. Otu ihe ahụ na-eme n'okwu dị iche. Ngwa ndị mebiri na mmelite ha na-aga n'ihu na-enwe akara dị elu, n'ihi na ha na-erite uru site na ọkwa dị mma ha nwere n'oge gara aga. Nke a bụ ihe na-aga ịgbanwe ugbu a, n'ụzọ doro anya.
N'aka nke ọzọ, e nwere ozi ọzọ maka ndị mmepe ngwa na Google Play. Mgbe nyocha na-eme, ọrụ nwere ike ịhapụ kwuru banyere kwuru ngwa. N'ọtụtụ ọnọdụ enwere ike ịnwe ndụmọdụ ma ọ bụ nkwanye, nke mere na ngwa ahụ dị mma. Nke a bụ ihe a ga - edobe, mana azịza ndị mmepe ahụ nwere ike inye gbanwetụrụ na nke a. A na-ewebata otu azịza a tụrụ aro.
Ọ bụ ọrụ sitere na nzaghachi akpaka Gmail, nke ahụ na-enwetakwa ọnụnọ ugbu a na gam akporo Q. N'ụzọ dị otú a, dabere na okwu onye ọrụ hapụrụ na ibe ngwa ahụ, ọ bụrụ na onye nrụpụta chọrọ ịzaghachi, egosiri gị usoro nzaghachi nke nhọrọ, sitere na akpaghị aka ma ọ bụ kwadoro, dabere na ọdịnaya nke ozi ahụ. Yabụ, ọ dịkarịrị ha mfe ịzaghachi azịza onye ọrụ.
Nke a bụ mgbanwe a na-ewebata maka ezigbo ihe kpatara ya. Site na Google Play kwuo na mgbe onye nrụpụta zara ozi ndị ọrụ hapụrụ na ibe ngwa ahụ, ndị ọrụ na-akwụsị ịgbanwe ọkwa ha maka nke ka mma, na nkezi ịrị elu nke 0,7 kpakpando. Yabụ nke a bụ ihe nwekwara ike inyere ngwa ahụ aka inwe ọkwa dị mma na ụlọ ahịa ahụ. Kedu ihe ị chere gbasara akụkọ ndị a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Google Play ga-agbanwe usoro akara maka ngwa